बच्चाको स्वास्थ्य सँधै बाबुआमाका लागि चासो र चिन्ताको विषय हुन्छ । आफ्ना बच्चाहरुले सानोतिनो रोग लाग्दा पनि उनीहरु अतालिन्छन् । तर, बच्चाहरुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने चाहिँ धेरै बाबुआमालाई जानकारी छैन । उनीहरु बिरामी भएपछि अस्पताल दौडाउँछन् तर, बिरामी हुन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाउँदैनन् । आफ्नो बच्चालाई पोषिलो खानेकुरामा बानी पारेर दिर्घकालिन रुपमा स्वस्थ राख्न सकिन्छ । तर, बालबालिकालाई एउटा मात्र पोषणले पुग्दैन । दर्जनौँ खाद्यपादार्थको...
अहिलेका युवा-युवती ‘फास्ट फुड कल्चर’ मा हुर्किरहेका छन् । उनीहरुलाई हरेक चीज जाँडो चाहिन्छ । किशोरावस्थामै प्रेममा पर्छन् उनीहरु । तर यस्तो हाउडे प्रेम धेरै समय टिक्दैन । आज हेराहेर, भोली प्रेम र पर्सी ब्रेकअप । हो, अहिलेको युवापुस्ता यही कल्चरमा बाँचिरहेका छन् । उनीहरु प्रेमलाई टाइमपासका रुपमा लिन्छन् । त्याग र समर्पणको भावना न्यून छ । खासमा उनीहरुलाई प्रेमको खास अर्थ र महत्व नै...
कागती बहुउपयोगी फल हो । यसको सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिनुका साथै सौन्दर्यमा पनि यसको उपयोगिता उत्तिकै छ । पानीमा कागतीको रस निचोरेर पिउनाले शरीरलाई भिटामिन सी, पोटासियम र फाइबर मिल्छ । तर, यसको अत्यधिक सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरलाई नकारात्मक असर पनि गर्न सक्छ । कागतीमा पाइने सिट्रस एसिडले दाँतलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ । यदि तपाईं धेरै मात्रामा कागतीको सेवन गर्नुहुन्छ भने दाँत कुँडिने वा...
कपाल फुल्नु एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । सामान्यतया यसले उम्मेर छिप्पिन थालेको संकेत गर्छ । तर, आजकाल कम उमेरमै धेरै मानिसहरुका कपाल सेताम्य हुन थालेका छन् । खासगरी गुणस्तरहीन स्याम्पु र सौन्दर्यका साधनको प्रयोगले समयभन्दा अगाडि नै धेरैको कपाल फुल्ने गरेको हो । केहीमा भने वंशाणुगत कारणले पनि कपाल चाँडै फुल्छ । यस्तै, थाइराइडले पनि यो समस्या निम्त्याउन सक्छ । कपालको जरामा मेलेनिन नामक कपाल रङ्गाउने...
लगातार यौनाङ्ग आगोले पोलेजस्तो जलन वा दुखाई हुन्छ, पिसाब पोल्ने र बारम्बार पिसाब गर्न जानुपर्छ भने यसले संकेत गर्छ पिसाबनलीमा संक्रमण अर्थात युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन (युटिआई)को समस्या भएको छ । नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत महिलाहरुलाई आफ्नो जीवनकालको क्रममा कम्तिमा पनि एकपटक युटिआईको समस्या भएको हुन्छ । यसमध्ये पनि एक चौंथाई महिलाहरुलाई एकपटक मात्रै होइन बारम्बार यस्तो संक्रमण हुन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाहरुलाई...
प्रत्येक दम्पत्तिको जीवनमा सन्तानको विशेष महत्व हुन्छ । त्यसैले त सन्तान नजन्मिएसम्म परिवार पूरा भएको मानिदैन । तर, बिहेपछि कतिपय पति-पत्नी बच्चा जन्माउने कुरालाई लिएर चिन्तित हुन्छन् । बच्चाको आगमनसँगै उनीहरुको स्वच्छन्दता हरण हुन्छ र बच्चाको स्याहारमै दिन जान्छ भन्ने उनीहरुको सोचाई हुन्छ । हुन पनि बच्चा जन्मिएपछि दम्पत्तिहरु पहिले जस्तो निस्फिक्री जीवन व्यतित गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको स्वतन्त्रता साँघुरो हुन्छ । त्यसो भनेर के बच्चा...
रुद्राक्ष, जो चित्रहरुमा देवीदेवता एवं ऋषिमुनीहरुले पहिरिएको देखिन्छ । पाखुरामा, नाडीमा, गलामा रुद्राक्ष लगाएको पाइन्छ । अहिले पनि रुद्राक्ष धारण गर्ने सिलसिला जारी छ । रुद्राक्ष खेती गर्नेदेखि व्यवसाय गर्नेसम्म छन् । खासगरी मठ-मन्दिरमा, पूजाआजामा, धार्मिक अनुष्ठानमा, योग-प्राणायाममा रुद्राक्ष प्रयोग गरिन्छ । आखिर किन रुद्राक्ष प्रयोग गरिएको होला ? यसको हाम्रो तन र मनसँग के सम्बन्ध छ ? रुद्राक्ष धारण गर्दा के फाइदा हुन्छ ?...